लेखक वार्ता :: Kitab Kiro - Complete Book News
लेखक वार्ता: देवेन्द्रराज पाण्डे
२०७७ माघ १९ गते
देवेन्द्रराज पाण्डे (८१) निजामती सेवामा सचिवको पदसम्म पुगेर ४० वर्षको उमेरमै अवकाश हुने ‘भाग्यमानी’ हुन्। सरकारी जागिर छोडेर पञ्चायतको कट्टर आलोचक बनेका पाण्डेले ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही समय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। मानवअधिकार, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, व ...
'तिर्खा मेटाउने होइन, प्यास र भोक जगाउने कोसिस हो'
२०७७ पुस १२ गते
झापाकोखुदुनाबारी, हालकोअर्जुनधारानगरपालिका३कास्थायीबासिन्दा तुलसीनिरौला उत्प्रेरणात्मकसाहित्यकालेखक, कवि, गीतकारतथावक्ताहुन्।उनकोपहिलोप्रेरणादायीपुस्तक आफैंलाईचिन्नेकोसिस निकैरुचाइएकोथियो।यो१११वटाकथाहरूकोसंग्रहसँगै१००वटागीतकोसंग्रह हिमालीबगैंचा र९३वटाकविताहरूकोसं ...
समकालीन राजनीतिक-सामाजिक डिस्कोर्समा असहमति लेखिरहेका लेखक हुन्— सौरभ । उनी एकेडेमिक इतिहासले फेला नपारेका गुढ तथ्य उधिन्छन् । इतिहासलाई वर्तमानसँग जोडेर लेख्नु उनको विशेषता हो । नेपाली इतिहास, संस्कृति, पहिचान र राजनीतिबारे मूलधारको बुझाइमाथि प्रश्न गर्ने उनका ‘सौरभका पच्चीस वर्ष' र &ls ...
'माफ गर्नुहोला, विवाहका लागि कुनै स्पेस छैन'
३ चैत, काठमाडौं । सरस्वती प्रतीक्षा सेलिब्रटी लेखिका हुन् । कविता कृति ‘यद्यपि प्रश्नहरु’, ‘बिम्बहरुको कठघरा’ र ‘बागी सारङ्गी’मार्फत विद्रोही चेत पस्केकी सरस्वती प्रतीक्षा फुटकर लेख लेखेर पनि चर्चामा आउँछिन् । सामाजिक सञ्जालमा समाजका बेथितिमाथि बहस गर्न रुचा ...
कविता पैसा तिरेर सुनिनुपर्छ, युट्युबमा लोकप्रिय हुनु मेरो दोष हैन !!!
वर्षौं साधना गरेका र दर्जनौं कृति निकालेका कविहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । तर, उनीहरुको खासै चर्चा हुँदैन । जम्मा एउटा कृति निकालेका नवराज पराजुली भने यतिबेला ‘स्टार कवि’ भएका छन् । जम्माजम्मी ३४ कविता लेखेका उनलाई साहित्य पढ्ने नेपालीले चिन्दिनँ भन्यो भने आश्चर्य हुन्छ । त्यसो त लोकप ...
नेपाली तथा हिमालयन अध्यन विषयमा केन्द्रित डा. माइकल हट युनिभर्सिटी अफ लन्डनको स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजका प्राध्यापक हुन् । हिजो र आजको नेपाली साहित्य, समाज तथा बदलिंदो समयमाथि अध्ययन–अनुसन्धान उनका रुचिका विषय हुन् । ३० वर्षयता नेपाली भाषा–साहित्यका निरन्तरका अध्येता बनेका ६ ...
नेकपा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीको हिजोआज अर्को परिचय पनि बनेको छ- लेखक। उनले लेखेको पुस्तक 'समृद्ध नेपाल' को दोस्रो संस्करण पनि बजारमा आएको छ। संसदको विकास समितिका सभापति अधिकारी व्यस्त समय तालिकाकाबीच पुस्तक पढ्न छुटाउँदैनन्। पत्रपत्रिकामा विकास निर्माणका विषयमा उनका लेखहरु पनि प्र ...
– पारस नेपाल, काठमाडौं जीवन्त भाषाका रूपमा आफ्नै विशिष्ट सौन्दर्य र विशेषता बोकेको नेपाली भाषा केही वर्षयता चौतारीमा अलपत्र छोडिएको मादल जस्तो भएको छ, जसलाई जति बेला मन लाग्यो प्याट्ट पारिहाल्ने । यस्तो अभ्यासले नेपाली भाषाको हित गर्दैन भन्ने यथार्थप्रति प्राय:ले हेक्का राखेको पाइँदैन । य ...
अहिले कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ ?अहिले त केही पढिरहेको छैन । पोखराबाट भर्खरै फर्किएँ । एक महिनाअघि पढेर सिद्धाएको पुस्तकचाहिँ ‘द हन्ड्रेड–इयर–वल्र्ड म्यान, हु क्लाइम्ड आउट अफ द विन्डो एन्ड डिस्एपियड’ हो । यो स्विडिस लेखक जोनास जोनासनको उपन्यास हो । यसको व ...